Acrylic resins များကို ထုတ်လုပ်မှုနည်းလမ်းဖြင့် ခွဲခြားထားသည်။
1. Emulsion ပေါ်လီမာပြုလုပ်ခြင်း- ၎င်းကို မိုနိုမာ၊ အစပြုသူနှင့် ပေါင်းခံရေတို့ကို အတူတကွ တုံ့ပြန်ခြင်းဖြင့် ရရှိသည်။ယေဘူယျအားဖြင့်၊ စေးသည် 50% အစိုင်အခဲ emulsion ဖြစ်ပြီး ရေ 50% ခန့်ပါဝင်သော စေးရည်ဖြစ်သည်။ပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်ထားသော emulsion များသည် ယေဘုယျအားဖြင့် နို့ဖြူပြာရောင် (Dingdal phenomenon) နှင့် g...
Resin Lenses များ ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် အသုံးပြုခြင်း။
admin မှ 18-07-01 တွင်
1. မျက်မှန်မတပ်ပါက မှန်သေတ္တာထဲတွင် ထည့်ထားသင့်သည်။မှန်ဘီလူး၏ အပြင်ဘက်မျက်နှာပြင် (အပြင်ဘက်မျက်နှာပြင်) ကို မာကျောသော အရာဝတ္ထုနှင့် မထိပါနှင့်။2. မှန်ဘီလူးကို မသုတ်မီ နှိပ်ရေဖြင့် ဆေးကြောပါ။ဆီများလာပါက ပန်းကန်ဆေးရန်အတွက် ဆပ်ပြာကို ဆေးကြောပြီး နှိပ်ရေဖြင့် ဆေးကြောပါ...
16-06-01 တွင် admin မှ
(1) methyl methacrylate နှင့် styrene ၏ကိုပိုလီမာ- ၃၇၂ အစေး၊ အဓိကအားဖြင့် methyl methacrylate monomer။styrene monomer ၏ ပါဝင်မှု သေးငယ်သောအခါ၊ copolymer ၏ စွမ်းဆောင်ရည်သည် PMMA နှင့် ပိုမိုနီးစပ်ပြီး PMMA ထက် ပိုသန့်စင်ပါသည်။styrene-modified polymethyl metha ဟုခေါ်သော စွမ်းဆောင်ရည်တွင် တိုးတက်မှုအချို့ရှိပါသည်။
acrylic resin ၏စျေးကွက်အခြေအနေ
14-12-01 တွင် admin မှ
နှစ်များတစ်လျှောက်တွင်၊ တရုတ်၏ acrylic resin လုပ်ငန်းသည် လျင်မြန်စွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာပြီး ၎င်း၏ထွက်ရှိမှုမှာ ဆက်လက်တိုးလာခဲ့သည်။အမျိုးသားစက်မှုမူဝါဒသည် အဆင့်မြင့်နည်းပညာသုံး ထုတ်ကုန်များဆီသို့ Acrylic resin လုပ်ငန်းကို အားပေးအားမြှောက်ပြုပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပရောဂျက်အသစ်များတွင် ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်များ၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည် g...
Resin Lenses ၏ အားသာချက်များနှင့် အားနည်းချက်များ
14-06-01 တွင် admin မှ
အားသာချက် 1. အလင်း- ယေဘူယျ အစေးမှန်ဘီလူးများ၏ သိပ်သည်းဆမှာ 0.83-1.5 ဖြစ်ပြီး အလင်းပြန်မှန်သည် 2.27~5.95 ဖြစ်သည်။2. ပြင်းထန်သောသက်ရောက်မှုခံနိုင်ရည်- resin မှန်ဘီလူး၏သက်ရောက်မှုခံနိုင်ရည်သည်ယေဘူယျအားဖြင့် 8 ~ 10kg / cm2 ဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့်မှန်ကွဲရန်မလွယ်ကူပါ၊ ဘေးကင်းပြီးတာရှည်ခံသည်။3. အလင်းပို့လွှတ်မှုကောင်း...
acrylic resin ၏အယူအဆနှင့်ဝိသေသလက္ခဏာများ
admin မှ 09-10-01 ရက်နေ့တွင်
Acrylic resin သည် acrylic acid၊ methacrylic acid နှင့် derivatives တို့၏ ပိုလီမာများအတွက် ယေဘူယျဝေါဟာရတစ်ခုဖြစ်သည်။acrylic resin coating သည် အခြားသော acrylates များနှင့်အတူ copolymerizing (meth) acrylate သို့မဟုတ် styrene ဖြင့် ရရှိသော သာမိုပလပ်စတစ် သို့မဟုတ် အပူချိန်ထိန်း စေးအကာတစ်ခုဖြစ်ပြီး acrylic resin ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော coating တစ်ခုဖြစ်သည်။